Apple patents ihe mberede maka Apple Watch | Esi m mac
Apple emewo patented ọhụrụ usoro mberede maka Apple Watch ihe nwere ike zipu ihe omuma banyere ndi enyi ma obu ezi n’ulo mgbe achọpụtara ya na onye ọrụ chọrọ nlekọta ahụike. Ọ nwere ike nyochaa pulsations ịchọpụta nsogbu obi, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Ikike nchọpụta a kpọrọ "CARE EVENT DETECTION AND ALERTS" na-akọwapụta usoro nke na-enyocha onye ọrụ Apple Watch maka ihe akpọrọ "ihe nlebara anya", ma ọ bụ ọnọdụ ọ bụla nwere ike ịchọ nlebara anya nke onye ọrụ ahụ. ndị ọrụ ahụike, ndi oku oku, ndị uwe ojii, ma ọ bụ ọrụ mberede ndị ọzọ.
Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịhazi ngwaọrụ ahụ nyochaa obi onye ọrụ maka arrhythmia, n'ihi na mgbe nchọpụta, zipu ozi banyere nzaghachi nye ezinụlọ ma ọ bụ ọnọdụ mberede. Ọ bụ ezie na ekwughị ya kpọmkwem na akwụkwọ ahụ, Apple Watch bụ naanị onye tozuru oke iji nweta ebumnuche nke usoro a chọrọ.
Nke ahụ bụ n'ihi na Apple Watch a kwadowo ya ihe mmetụta dị elu, na ngwaike nhazi nke nwere ike ichoputa usoro ndia. I nwekwara ike ikwurịta okwu na iPhone iji jide n'aka na ọ dịghị nke alerts na-efu efu.
N'ọnọdụ ụfọdụ, iPhone na Apple Watch ga-arụkọ ọrụ ọnụ iji chọpụta ihe omume nlebara anya ndị a. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na iPhone achọpụta mgbanwe na osooso ma ọ bụ elu, elekere na-achọpụta mgbanwe dị ukwuu na ọnụọgụ obi, nke a nwere ike ịnye onye ọrụ ọrụ na ọ chọrọ nlebara anya ngwa ngwa. O nwekwara ike inwe ike zipu ozi bara uru site na njikere, dị ka data ahụike nke onye ọrụ nwetara na ngwa Ahụike, ọnọdụ ha, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Na njikọ a anyị hapụrụ gị patent nke usoro mberede maka Apple Watch.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple patenti ihe mberede usoro maka Apple Watch
Nke isii beta maka tvOS sistemụ arụmọrụ nke Apple TV 4 ọhụrụ